Sir Alex Ferguson oo 6 sanadood kaddib mar kale tababare u noqonaya Manchester United – Gool FM
Haaruun February 16, 2019
(Manchester) 16 Feb 2019. Tababarihii hore ee rug cadaaga ah ee Manchester United Sir Alex Ferguson ayaa mar kale dib ugu soo laabanaya naadigiisii hore 6 sanadood kaddib markii uu ciyaaraha ka fariistay.
Naadiga MU ayaa caddeeyay in Ferguson uu mar kale tababare u noqon doono kooxdiisii hore ee 27-ka sanadood uu macallinka u ahaa, waxaana hor kici doonaa Manchester United isagoo tababare ah ciyaar lagu xusayo 20 sano guuradii ka soo waeegatay markii saddexda Koob hal xilli ciyaareed ku guuleysteen sanadkii 1999-kii.
26-ka Bisha May ee sanadkan ayaa waxaa Old Trafford lagu qaban doonaa ciyaar ay isaga hor imaan doonaan Bayern Munich iyo Man United oo sidan oo kale 26 May, 1999 ciyaartii kama dambeysta ahayd ee UEFA Champions League ku wada yeesha Barcelona, waxaana 2-1 koobkii ku qaadday Manchester.
Ferguson oo 77 jir ah ayaa ka fariistay shaqadii tababarenimo ee kooxda Manchester United 2013-kii, kaddib markii uu kooxdaasi ku sagootiyay Koobkoodii 20-aad ee Horyaalka Ingiriiska oo ah Koobkii ugu dambeeyey ee Premier League ee ay qaadaan.
Horyaalka Ingiriiska, Koobka FA-ga iyo Champions League ayay Manchester United ku wada guuleysatay sanadkii 1999-kii.
Laakiin waxaa yaab leh in kulankaasi ay ciyaari doonaan xiddigihii 20 sano ka hor wada dheelay oo uu ku jiro Ole Gunnar Solskjaer oo maanta tababare u ah Manchester United, balse waqtigaasi ahaa ciyaartoygii u dhaliyay goolkii guusha ee ay MU ku qaadday Koobkii Champions League.
Ferguson iyo xiddigihii qaaday Champions League 1999
Solskjaer oo kor u haya koobkii Champions League ee uu u horseeday kooxdiisa Man United 1999